Hazard iyo madaxweyne Florentino Perez oo si wada jir ah saxaafada kula hadlay garoonka Santiago Bernabeu – Gool FM
(Madrid) 13 June 2019. Eden Hazard ayaa ugu dambeyn si rasmi ah qalinka ugu duugay heshiis cusub kooxda Real Madrid, kaasoo gaaraya ilaa iyo 2024, kaddib markii uu kaga soo biiray Chelsea.
Hazard ayaa markii ugu horeysay kala soo hor muuqday saxaafada madaxweynaha kooxda Real Madrid ee Florentino Perez, kaddib markii uu ciyaaryahanka reer Belgium saxiixay qandaraaskiisa Los Blancos.
Florentino Perez ayaa bilaabay inuu ku soo dhaweeyo Eden Hazard iyo qoyskiisa caasimada Madrid ee dalka Spain, isagoo sheegay in taageerayaasha Madrid ay haatan ku faraxsan yihiin imaatinkiisa garoonka Santiago Bernabeu.
Ugu horeyn Madaxweynaha kooxda Real Madrid ee Florentino Perez ayaa wuxuu hadalkiisa ku bilaabay.
“Maanta, taageere kasta oo kooxdan ah ayaa ku nool jawi farxadeed ee aad u weyn, sababa la xiriira inuu nagu soo biiray xiddigan tayada leh, Maanta Hazard wuxuu qeyb ka yahay Real Madrid”.
“Waxaan dooneynaa inaan ku guuleysano koobab, waxaan kaliya dooneynaa inaan guulo gaarno, waxaan dooneynaa inaan raacno qaabka madaxweynahii geeriyooday ee Bernabeu, kaasoo kooxdan ka sameeyay taariikh”.
“Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo kooxda aan saaxiibada nahay ee Chelsea oo u ogolaatay Hazard inay u rumowdo riyadiisa isla markaana uu yimaado Real Madrid”.
Intaas kaddib Eden Hazard ayaa hadlay markii ugu horeysay tan iyo markii uu yimid garoonka Santiago Bernabeu wuxuuna yiri:
“Soo dhawaada dhamaantiin, luqudeyda Spain ma fiicna, waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo qof walba”.
“Waxaan doonayaa inaan Real Madrid kula guuleysto koobab, taasi waa riyada caruurnimadeyda” ayuu yiri Eden Hazard.
Real Madrid oo soo bandhigtay xiddigeeda cusub ee Eden Hazard … + SAWIRRO